Borosy Procreate tsara indrindra: fonosana borosy Procreate tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Borosy Procreate tsara indrindra
Nerea Morcillo | | borosy, dia midika hoe
Loharano: Macworld Spain
Illustrations dia iray amin'ireo singa sary izay misy ary anisan'ny famolavolana sary. Betsaka ny loharanom-baovao novolavolaina ho an'ny famoronana an'ity karazana tsipika an-tsary ity. Izany no antony ato amin'ity lahatsoratra ity dia ampahafantarinay anao ny tontolo ara-javakanto kokoa sy tsy dia misy sary.
Raha mpankafy borosy ianao, vintana ianao satria amin'ity lesona ity dia hasehontsika anao ny sasany amin'ireo fonosana borosy Procreate tsara indrindra, maro amin'izy ireo no natao ho an'ny tanjona samihafa.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny hahafantaranao hoe inona ny karazana borosy mety indrindra amin'ny fomba fanaovanao sary, inona ny alokaloka mahaliana anao indrindra amin'ny borosyo, na, ohatra, karazana tendrony inona no tsara indrindra miaraka amin'ny tsipika ara-tsary sy ara-javakanto. .
1.3 interface tsara
2 ny borosy tsara indrindra
2.2 Gouache Set
2.4 borosy ravina
3 Fitaovana hafa
Voalohany indrindra, raha mbola manontany tena ianao hoe inona ny Procreate, dia hampahafantatra anao ny famelabelarana fohy momba ity programa ity izay ampiasain'ny mpamorona sy ny mpanakanto. Procreate dia fitaovana natokana ho an'ny famolavolana sy famoronana sary. Mifandray akaiky amin'ny fitaovana Adobe hafa toy ny Illustrator na Photoshop izy io ary lasa fitaovana kintana ho an'ny mpampiasa artista indrindra. Fitaovana mora ampiasaina izy io, satria natao hampahafantarana ny besinimaro ny tontolon'ny fanoharana.
Ny iray amin'ireo endri-javatra hanasongadinana ity programa ity dia azo alaina ho an'ny solosaina sy IPad na fitaovana hafa izay takelaka. Raha toa ka mbola tsy mazava aminao hoe avy aiza ity fitaovana ity sy ny tena ataony dia ireto misy endri-javatra tsara indrindra.
Ny tena mampiavaka azy dia ny fisian'ny borosy sy ranomainty chromatic isan-karazany. Raha ny marina, ity fitaovana ity Manana borosy maherin'ny 150 izy io ary mizara ho sokajy sy sokajy 20 eo ho eo. Ho fanampin'izay, manana safidy ihany koa izy io mba hahafahana misintona bebe kokoa sy mametraka azy ireo ao amin'ny lahatahinao. Ka isaky ny mila azy ianao dia afaka miditra amin'ny fidirana kely fotsiny toy ny lahatahiry.
Tahaka ny amin'ny Photoshop, zavatra mitovy amin'izany no mitranga ao amin'ny Procreate, dia fitaovana miasa miaraka amin'ny sosona fanitsiana. Ity endri-javatra ity dia tena mahasoa ary avy amin'ny fampiasana programa toa ny Photoshop amin'ny fomba mazava tsara ianao ary tsy te hijanona hiasa amin'ny singa mitovy. Azo antoka fa tena mahazo aina sy mandaitra.
Ny endri-javatra iray hafa tokony hotadidina momba ity programa ity dia ny manana ampahany amin'ny animation, izany hoe, afaka manao andian-dahatsary amin'ny alàlan'ny frame miaraka amin'ny saryo ianao. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny manome azy hetsika ary tsy izany ihany, manolotra izany fikasihana fiainana sy realisme izany. Tsy isalasalana fa ity programa ity dia mitantana izay rehetra azonao alaina sary an-tsaina ary ireo lafiny ireo no mahatonga azy io ho iray amin'ireo fitaovana ampiasaina indrindra tato ho ato. Raha fintinina, manantena izahay fa naharesy lahatra anao izahay ary nanomboka nanandrana izany ianao ary nanolotra ny lafiny ara-kanto indrindra.
ny borosy tsara indrindra
Manaraka, hasehonay anao andiana fonosana izay misy ny borosy tsara indrindra, maro amin'izy ireo no manana toetra samihafa, satria miovaova koa ny fampiasana azy. Izany no antony manampy anao hahita ny karazana sary izay mamaritra anao tsara indrindra sy mifanaraka amin'ny fenitry ny zavakanto.
Azonao atao ny misintona ny sasany amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny Internet, ao amin'ny boaty fikarohana na efa manana hafa azo alaina amin'ny alàlan'ny programa mitovy. Tsy te hampiandry anao intsony izahay, hanomboka amin'ny sasany amin'izy ireo izahay.
Loharano: Art Station
Crayon dia fonosana Procreate feno izay miavaka amin'ny fanolorana borosy mahafinaritra miaraka amin'ny rivotra mihetsiketsika sy zaza na tanora. Izy ireo dia natao ho an'ireo olona liana amin'ny tontolon'ny fantasy, izany hoe ny tantaran'ny mahery fo na ny famoronana tontolo foronina sy mahafinaritra toa an'i Alice in Wonderland.
Raha mbola tsy nandao ny ankizilahy na ilay tovovavy entinao ao anatiny ianao, dia izao no fotoana hanohizanao ny fikojakojana azy ary hanomboka hamorona ny asanao voalohany. Azo antoka fa iray amin'ireo tsara indrindra hanombohana izany.
Ity andiany antsoina hoe Gouache ity, dia andiana borosy izay miavaka indrindra amin'ny fanolorana borosy 40 manontolo namboarina sy namboarina araka izay tianao. Ny tena mahasoa an'ity karazana borosy ity dia ny fanaovana simulation ny firafitry ny taratasy amin'ny teknika fandokoana rano malaza.
Tsy isalasalana fa andiana borosy izay tena malaza amin'ny vahoaka izay tia milalao amin'ny haingon-trano sy ny vokatra farany amin'ny watercolor. Izy io dia napetraka izay natolotra be tato ho ato ary tsy misy isalasalana.
Nautika dia iray amin'ireo andiana borosy izay mamela ny zava-misy any aoriana ary mandrakotra anao amin'ny nofinofin'izy ireo. Ny borosy dia natao tamin'ny fomba izay ahafahanao manomboka mamorona endrika tena mahaliana miaraka amin'ny fironana organika. Amin'ity amboara borosy ity, azonao atao ihany koa ny mamorona sketsa voalohany sy mamorona tontolo mihetsika ary loko recharged mahafinaritra na tonony chromatic mavitrika sy manaitra.
Raha fintinina, io no fitaovana tonga lafatra hanohizana manolotra ny sarinao amin'ny lafiny mahagaga sy mampihetsi-po kokoa, mora ampiasaina ary mety amin'ny fitaovana rehetra miaraka aminao.
Ny borosy ravina dia karazana borosy mifanaraka amin'ny sary ara-nofo mifandraika amin'ny natiora. Izany hoe, raha toa ianao ka tia na tia ny zavaboary, dia tsy afaka manadino ity andian-borosy ity izay ahafahanao manomboka manao sary momba ny ala, ny voninkazo, ny karazana hazo rehetra, ny tendrombohitra na manolotra ny sarinao amin'ny endrika rustic sy lohataona kokoa.
Ho fanampin'izay dia manana safidy mandeha ho azy izy io izay miasa tsy miankina ny borosy ary tsy maintsy mampihatra ny loko sy ny tora-kofehy tianao hampiarahana azy ianao.
Tsy ny procreate irery no programa azonao atao ny manao sary na maneho an-tsary araka izay tianao, satria misy safidy hafa raha mbola tsy naharesy lahatra anao izahay hanandrana izany. Betsaka ny loharano maimaim-poana na karama ahafahanao manohy mampivelatra ny fahaizanao ara-javakanto. Izany no antony namoronanay lisitra kely ho anao, miaraka amin'ireo programa fanaovana sary tsara indrindra.
Manantena izahay fa tena ilaina ho anao izy ireo ary ambonin'izany rehetra izany dia hanampy anao hanatsara ny teknikan'ny fanaovana sary. Ireto ny sasany amin'ireo rindrambaiko famoronana sary mihetsika na sary dimy voalohany:
Adobe Illustrator dia iray amin'ireo rindranasa izay ao anatin'ny Adobe software suite. Efa renareo tokoa Izy. Eny, iray amin'ireo programa fanoharana sy vector tsara indrindra eny an-tsena. Tsy vitan'ny hoe mamela ny famoronana sary, fa azo atao koa ny mamorona marika ho an'ny tetik'asa momba ny maha-orinasa anao, satria miasa indrindra amin'ny vectors.
Manana borosy maromaro ihany koa izy ary zaraina amin'ny teboka samihafa izy rehetra, io no fitaovana tsara hanombohana manao sary satria mora ampiasaina ny interface, ankoatra ny fitaovany izay maro.
Clip Studio Paint dia iray amin'ireo programa tena ilaina izay manampy anao hanomboka ny asanao amin'ny maha mpanao sary na sary. Eny, tsy vitan'ny hoe mahavita mamorona fanoharana izy, fa, noho ny interface haingana sy mahazo aina, dia ahafahanao mamorona tantara an-tsary ihany koa.
Ny fitaovany dia novolavolaina amin'ny fomba izay tsy hanananao olana ho very eo amin'izy ireo na hitantana azy ireo. Raha fintinina dia iray amin'ireo programa izay tsy mila mampiasa fampianarana be sy mankaleo ianao, fa tsy mila fanampiana avy any ivelany. Fitaovana kintana izy io.
Corel Painter dia fitaovana manan-talenta amin'ny famoronana endrika. Ary koa, miaraka amin'ny Procreate dia iray amin'ireo programa manolotra karazana borosy marobe. Amin'ny fitambarany dia misy andiana borosy 1000, izay midika hoe borosy isan-karazany amin'ny habe sy endrika rehetra mba hahafahanao miala voly.
Ny mampiavaka an'ity fandaharana ity dia ny ahafahanao miloko sary ihany koa, izay mety hahafinaritra ihany koa ho an'ny mpihaino tanora kokoa toy ny ankizy. Raha fintinina, raha mahafinaritra sy fialamboly ny zavatra tadiavinao dia mety aminao izany. Ary koa, maro amin'ireo borosy no maimaim-poana tanteraka.
Araka ny efa azonao nohamarinina dia misy borosy ao amin'ny Procreate izay afaka manampy anao hanatsara ny tetikasanao, ka izany no maha-zava-dehibe ny hahafantaranao programa toy ity fitaovana artista ity satria mety hahaliana anao izy ireo rehefa mitombo eo amin'ny tontolon'ny famolavolana. .
Manoro hevitra anao izahay hanohy ny fikarohana borosy satria maro ny borosy misy. Ho fanampin'izay, azonao atao koa ny manandrana ny sasany amin'ireo programa nasehonay anao ary amin'izany fomba izany dia mianatra fitaovana bebe kokoa. Sahia ary araraoty ny mpanakanto anananao ary manomboka amin'ny aventures vaovao miandry anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Borosy Procreate tsara indrindra
Ahoana ny fisafidianana monitor ho an'ny famolavolana sary